Ikhibhodi ebonakalayo "-Windows 7" ibonakala phezu desktop noma yimuphi omunye okhiye amafasitela. Ukuze alenze libonakale, kufanele zifakwe, futhi lokhu ukwenza thize yezenzo.
Kungani e ikhibhodi inikwe amandla uhlelo ekuskrini yokusebenza?
Bambalwa abantu baqonde ukuthi kungani i-Windows nhlelo, kukhona umsebenzi ukubonisa ikhibhodi kudeskithophu. Ukuze uqonde lokhu, kubalulekile ukuze ujike ukusiza kancane ukwelekelela ke.
Okokuqala ekuskrini iyadingeka ukuze labo bantu; iminwe abapholile noma sahlukene nalo. Ngaphezu kwalokho, kungasiza uma njalo ikhibhodi okhiye wavele wayeka ukusebenza, futhi Kuyaphuthuma ukuqedela umbhalo, noma uthayiphe igama lefayela owamukelayo.
Eminyakeni yamuva babe amadivayisi ethandwa kakhulu ezifana computer tablet. Lezi kungenziwa exhunywe amadivayisi ezivamile usebenzisa bluetooth noma Wi-Fi, kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi omakhalekhukhwini ne-USB enethiwekhi umsebenzi kungaba nzima kakhulu, uma kungekhona kwekhibhodi ebonakalayo.
Kungasiza futhi ekuvikeleni ngokumelene izinhlelo ezinonya ngokuthi keyloggers. Bafunda amaphasiwedi efakiwe nge kwekhibhodi, bese ithumela ukuba umhlaseli.
Indlela yokuvula i-kwekhibhodi ebonakalayo, uma kukhona evamile?
Inqubo lokuqala. Izinguqulo zakamuva Windows OS sizikhandle lwenteke search umsebenzi. Vele uchofoze inkinobho "Qala" kubha yokusesha, faka "ikhibhodi screen". Manje uchofoze phezulu search isixhumanisi, bese iwindi ngakwesokudla lizovela esikrinini.
Indlela ezimbili, ngaphezulu tekusebenta. Udinga nje ucindezela inhlanganisela okhiye amafasitela + R, kuzovula iwindi ngokuthi "Gijima." Kuyo bhala "osk" noma "osk.exe", bese uchofoza inkinobho "OK" noma "ENTER". Uma ifasitela elingakwesobunxele emva ngokucindezela inhlanganiselazihlonzi kungaqali evulekile, kufanele wenze izenzo ezimbalwa. Okokuqala, beka isikhombisi ku "Qala" imenyu bese uchofoze inkinobho yegundane kwesokudla, ukhethe "Properties". Ilungelo ukuthola "Izilungiselelo" bese uchofoze kuso. Ngemva kokuchofoza ukuvula kwelinye iwindi lapho udinga ukubeka umkhaza iseli eduze "Gijima."
Indlela yokuvula i-kwekhibhodi ebonakalayo, uma izinyathelo ezingenhla zenziwa, kodwa lutho usebenza? Vele uvule i-"Qala" imenyu, futhi kukholamu ngakwesokudla, ukhethe "Run", futhi manje ungakwazi ukungena kalula igama lefayela "osk" noma "osk.exe"
Indlela yokuvula i-kwekhibhodi ebonakalayo, uma evamile ayisebenzi?
Ikhibhodi ekwiskrini angavulwa kuphela ngokusebenzisa igundane.
Chofoza "Qala," khona-ke "Control Panel" bese ukhetha "Ukufinyeleleka".
Iwindi kuvula ngesihloko "Finyelela Centre".
Ngemva ngokuchofoza "Nika amandla ikhibhodi ebonakalayo" phezu wonke amafasitela avele ukhiye othandwayo.
Vula i-Windows Explorer, chofoza kabili ngokucindezela isithonjana "Computer yami" (kuyinto efiselekayo ukwenza lesi senzo egameni umlawuli).
Ngakho ukuthi unganika amandla kanjani ikhibhodi ebonakalayo ngaso sonke isikhathi kungenzeka ngenxa control panel, ikakhulukazi uma ikhompyutha yakho ithelelekile, ngezinye izikhathi ufuna ukuvula elisebenzisekayo akho.
Okulandelayo, iya ngokusebenzisa indlela "C: \_ Windows \_ System32 \_" futhi ugijime ifayela elisebenzisekayo "osk.exe".
Amasethingi bese Izici ezithuthukisiwe
Kusikrini ikhibhodi ebonakalayo ivuliwe, indlela uvule ongakhetha yayo ifasitela? Lena akunandaba - chofoza inkinobho "Izilungiselelo". Lapha ungalungiselela impendulo yayo isiqondiso nje ngokubamba pointer igundane phezu inkinobho ethile - ke kuzothathwa ngokuthi lo khiye icindezelwa.
Ngokuvamile, ngemva kwesikhathi esithile, umsebenzi OS njengenhlangano ikhibhodi ekuskrini iba ezingadingekile. Ukuze ukhubaze iwindi akasadingi ukusebenza ekhoneni eliphezulu kwesokudla, chofoza ijwayelekile izinkinobho umsebenzisi: oludwetshelwe ukugoqwa, noma cross - okwesikhathi Ukuvalwa Imininingwane.
Ukuhlanza disk ikhompyutha
-Google Play Market: nephutha 495. kanjani ukulungisa izindlela elula behluleka?
Photo zokukhwabanisa: njengasezulwini "Photoshop" ukufaka isithombe isithombe
Indlela ukuqeda odla ku amapayipi
New Ford Focus Abanikazi Izibuyekezo
Ukubalwa kwe-ovulation ngenyanga. Izici zendlela kanye nezincomo zabodokotela
Stroke e amakati: izimpawu, izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Kuyini massage Thai? kanjani Thai massage?
Kanjani ukuze uthole ngokushesha ukhulelwe? indlela kagogo: Eliqinisekisiwe Izindlela